Izikhokelo zezeMpilo zeCDC: Ayilungelanga iCarnival Cruise Line
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Izikhokelo zezeMpilo zeCDC: Ayilungelanga iCarnival Cruise Line
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukubambisa • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeLuxury • iindaba • Ukwakha kwakhona • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zase-USA ezaphulayo
25 imiz efundwayo
Umzila weCarnival Cruise wonwabe. Khuseleka. Iiprotokholi kunye neenkqubo zenziwe ngokudibana neengcali zonyango. Ziyilelwe ukuba zisebenze kwaye ziguquguquke njengoko imeko yangoku yezempilo yoluntu iguquka.
Kude kube kukwaziswa, yonke imisebenzi yeCarnival iyakufezekisa lo mgangatho.
I-Carnival Cruise Line ngumgaqo wokuqala wokuhamba ngenqanawa ukusuka ePort yaseBaltimore ukusukela oko kuyekisa ishishini ngokubanzi.
I-Carnival Pride imiselwe ukuba ihambe namhlanje ngolwandle iintsuku ezisixhenxe ukuya eBahamas, ndwendwela indawo ezidumileyo zaseNassau, eFreeport nakwisiqithi sabucala seHalf Moon Cay.
Phambi kokumka, umsitho "Wokubuyela Kokonwaba" ubanjelwe kwisikhululo apho uMongameli weCarnival uChristine Duffy, uKapteni weCarnival Pride uMaurizio Ruggiero kunye nePort of Baltimore Executive Director uWilliam P. Doyle basika iribhoni kwaye bamkela ngokusesikweni iindwendwe zokuqala ebhodini .
"Siyavuya ukubuyela eBaltimore, sinika iindwendwe zethu ikhefu lokuphumla ebelilinde ngomonde kodwa bexhasa uqoqosho lwasekhaya kwaye sinika abasebenzi bethu ithuba lokuxhasa iintsapho zabo ekhaya," utshilo uChristine Duffy , umongameli weCarnival Cruise Line. "IBaltimore ibe liqabane elihle isithuba esingaphezulu kweminyaka elishumi kwaye sonwabile ukubuyela kulonwabo kule marike iphambili ekhonza amakhulu amawaka eendwendwe eMantla mpuma kunye noNxweme lweAtlantiki."
“Olunjani lona usuku kumazibuko aseBaltimore!” utshilo uMlawuli oPhetheyo wePort Baltimore uWilliam P. Doyle. “Silinde ixesha elide ukwamkela ukubuya kweCarnival kwiCharm City. I-Baltimore's Cruise Maryland iyoyikeka-indawo yethu yokuhamba ngenqanawa ngokuthe ngqo i-Interstate 95 kunye neBWI Airport iTogogo Marshall isemizuzu eli-15 kuphela. Indawo yokugcina iinqanawa ihleli ecaleni kweBaltimore eyaziwa ngokuba yi-Inner Harbour, kunye neFederal Hill, iFort McHenry, kunye neFells Point. Kukho indawo eninzi yokubona indawo, ukutya kunye nokuthenga. Ngoko ke hamba ngenqanawa usuka eBaltimore, wonwabele isixeko sethu esikhulu, uze uhambe ngephenyane usiya kwezinye zeeparadesi ezimangalisayo ehlabathini. ”
I-Carnival Cruise Line yaphehlelela inkqubo yokuqala yokuhamba ngeenqanawa ukusuka eBaltimore ngo-2009 kwaye ukusukela ngoko iqhube ngaphezulu kwesigidi seendwendwe, isenza iCarnival ibe ngoyena mntu uhamba ngenqanawa kwizibuko.
Ngo-Novemba, inqanawa entsha, i-Carnival Legend, iyakuthatha indawo ye-Carnival Pride eBaltimore xa ikhefu le-Carnival lisuka eTampa.
I-Carnival inikezela uluhlu olubanzi lweendlela zokuhamba ngeenqanawa ezivela eBaltimore, kubandakanya:
Iintsuku ezintandathu kunye neentsuku ezisixhenxe zokuhamba ngolwandle ukuya eBermuda naseBahamas
Uhambo lweentsuku ezisibhozo oluya eCanada / eNew England naseCaribbean
Uhambo lweentsuku ezili-14 lweeCarnival olwandle oluya ePanama Canal nakwindawo ekumazantsi eCaribbean.
Uhambo lweCarnival Sailabration oluya kwiCarnival Legend ngo-Matshi 2022nemisebenzi ekhethekileyo ebhodini kunye nokuzonwabisa ngokudibana neCarnival Cruise Line's 50th Imibhiyozo yemihla yokuzalwa.
Inkqubo yokusebenza yeCarnival igqitha kwizindululo zamaZiko aseMelika oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo.
I-Carnival iya kuqhubeka nokuqhuba ii-cruise ezigonyiweyo njengoko kuchaziwe yi-CDC, kubandakanya ukuba bonke abasebenzi bagonyiwe ngokupheleleyo.
Ngobuninzi bolumkiso kunye nokuphendula kwinani elandayo le-COVID-19 e-US ebangelwe kukungafani kwe-Delta, iCarnival ihlaziya iiprotocol kunye neemfuno ngokubhekisele kuvavanyo lwangaphambi kokuhamba ngenqanawa kwiindwendwe ezigonywe ngokupheleleyo kunye nomgaqo-nkqubo wemaski ebhodini.
I-Carnival ilindele ukuba la manyathelo ayakuba ngethutyana kwaye aya kuhlengahlengisa iinkqubo zethu ezisekwe kwiingcebiso zabacebisi bezempilo kunye noluntu.
Nantsi imilinganiselo eyamkelweyo kwaye yazisiwe yiCarnival Cruise Line
Zonke iindwendwe kufuneka ziphonononge ngononophelo ukubhukisha kwangaphambili kunye neengcebiso zempilo zaphambi kokuhamba kwiwebhusayithi yethu kwaye Amaziko aseMelika oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo (CDC) iwebhusayithi .
IINKCUKACHA ZOKUGQIBELA KWANGAPHAMBILI: Ukuze kulawulwe iiseyile zethu zokugonya, kubaluleke kakhulu ukuba zonke iindwendwe zijongane nombuzo omnye we-imeyile yangaphambi kokuhamba ngenqanawa efuna ukugqitywa kuye wonke umntu okugcinileyo. Iindwendwe ziyacelwa ukuba zihlaziye iprofayili yazo kwiCarnival.com ngolwazi lwazo lwangoku njengoko siza kube sinxibelelana ngothotho lwee-imeyile. Nceda ufunde yonke imbalelwano kwaye ugcwalise zonke izicelo zolwazi ngaphambi kokubhoda. Ukusilela ekuthobeleni ulwazi lwangaphambi kokuhamba ngenqanawa ngexesha elifanelekileyo kuya kukhokelela ekucinyweni.
UMGANGATHO WOKUGCINA NOKUVAVANYA
Iindwendwe ezigonywe ngokupheleleyo
Ukuhamba ngenqanawa ngogonyo kuyafumaneka kwiindwendwe ezifumene idosi yokugqibela yeyeza eligunyazisiweyo le-COVID-19 ubuncinci kwiintsuku ezili-14 ngaphambi kosuku lokuhamba ngenqanawa kwaye banobungqina bokugonywa.
Ukuhamba ngenqanawa ukusuka nge-12 kaSeptemba 2021, iindwendwe ezigonywe ngokupheleleyo kufuneka zibonise neziphumo ezibi zovavanyo lwe-COVID-19 (PCR okanye antigen) oluthathwe kwiintsuku ezintathu phambi kokuqala. Umzekelo, ukuba ukuhamba ngenqanawa kungoMgqibelo, uvavanyo lunokuthathwa nangaliphi na ixesha ukusuka ngoLwesithathu ukuya ngoLwesihlanu. Iindwendwe nazo zinokuthatha uvavanyo kusasa ekuseni ukuba nje ziqinisekisiwe ukuba ziya kufumana iziphumo zovavanyo ngaphambi kwexesha labo lokungena.
Ukusebenza ngokuhamba ngomkhumbi ngoSeptemba 13, 2021, i-CDC ifuna uvavanyo lwaphambi kokuhamba ngenqanawa kwiindwendwe ezigonyelweyo eziza kuthathwa zingaphelanga iintsuku ezimbini ngaphambi komhla wokuhamba ngenqanawa. Ukuba ukuhamba ngenqanawa kungoMgqibelo, uvavanyo lunokuthathwa ngoLwesine nangoLwesihlanu, kwaye kude kube ngoMgqibelo, ukuba uqinisekisiwe ukuba uza kufumana iziphumo zakho ngexesha lokungena.
Ubungqina bokugonywa, ngolu hlobo lulandelayo, luya kufuneka kwisiphelo sendlela ngaphambi kokubhoda:
Ingxelo yoqobo yokugonya ekhutshwe ligunya lezempilo lelizwe elalilawula ugonyo (okt, iKhadi leRekhodi yokuGonya ye-CDC yase-US). Iikopi okanye iifoto zamkelwe.
Isatifikethi se-COVID-19 yedijithali (ikhowudi ye-QR yamkelekile), irekhodi lokugonywa kwe-COVID-19 kumnikezeli wezempilo (eyamkelweyo nge-imeyile yedijithali), irekhodi lezempilo elenziwa ngombane okanye irekhodi likaRhulumente leNkqubo yoLwazi lokuGonya nalo lamkelekile.
Igama kunye nomhla wokuzalwa kwirekhodi lokugonya kufuneka lihambelane namaxwebhu okundwendwela undwendwe kwaye libonise ukuba undwendwe lugonyiwe ngokupheleleyo. Imihla yokugonywa kufuneka ibonise ukuba undwendwe sele lugqibile idosi efunekayo ngaphandle kweentsuku ezili-14 phambi komhla wokuhamba ngenqanawa. Oku kuthetha ukuba ngosuku lokuqalisa, iintsuku ezili-15 ziya kube zidlulile okoko kwafunyanwa idosi yokugqibela. Uhlobo lwesitofu, imihla esetyenzisiweyo, kunye neenombolo kufuneka zibonakale ngokucacileyo.
Sincoma iindwendwe ukuba zinolwazi loqhakamshelwano (i-imeyile kunye nefowuni) ezifumanekayo ngoko nangoko kumboneleli wezempilo okanye indawo yeklinikhi ekhuphe isatifikethi, ukuze kuqinisekiswe ukugonywa xa kufuneka njalo. Indawo yokubhalisa yogonyo nayo inokusetyenziswa.
Iindwendwe ziyakhuthazwa ngamandla ukuba ziphonononge iirekhodi zazo zokugonya kwaye ziqinisekise ukuba ziyafikelela kwimigangatho yethu, kwaye zinobungqina besiphumo esibi sovavanyo lwe-COVID-19, ngaphambi kokuya kwisikhululo senqanawa ukukhusela imeko apho zingenakho ukuhamba ngesikhephe okanye ulungele ukubuyiselwa imali.
Kuhambo oluya eMelika, i-CDC ifuna ukuba zombini izitofu kuthotho lweedosi ezi-2 lube luhlobo olufanayo. Bakwamkela ukuxuba izitofu ze-mRNA kuphela (iPfizer neModerna). Ayikho enye indibaniselwano yesitofu sokugonya ehlangabezana neenqobo zokugweba ezinokuthathwa njengezitofwe ngokupheleleyo. Umzekelo, iCanada okanye ezinye iindwendwe zamazwe aphesheya ezifumene indibaniselwano ye-AstraZeneca kunye nePfizer zithathwa njengezingafakwanga zigonyo yiCDC. Iindwendwe ezingagonywanga ngokupheleleyo, ngokwezi nqobo zokugweba, ziya kuthathwa njengezinga gonywanga kwaye kufuneka zenze isicelo sokuxolelwa kugonyo.
Iindwendwe ezingagonywanga-Ukukhululwa kwimigangatho yokugonywa
Izidingo zeenqanawa zokuhamba ngenqanawa zokungena kumazibuko angaphandle kwe-US ziyaqhubeka nokuvela kwaye iCarnival Cruise Line kufuneka isebenze ngokuhambelana ngokupheleleyo nale migaqo. Ukuxolelwa kokuthintela uhambo ngenqanawa kwiCaribbean kuya kuncitshiswa kwinani elincinci kakhulu labantwana abangaphantsi kwe-12, kwaye ulutsha kunye nabantu abadala abanesimo sezonyango abanokunika isiqinisekiso esibhaliweyo kumboneleli wabo wezonyango ukuba abanakugonyelwa izizathu zonyango. Ukuhamba kwethu ngomkhumbi ukusuka eFlorida, eTexas, eLouisiana naseMaryland kuyakusebenza phantsi kwale miqathango kude kube nguDisemba 31, 2021 kucingelwa ukuba izithintelo ezikhoyo nezimiselweyo ezibekwa ziindawo ziya kuhlala zikhona.
Ukukhululwa kwezitofu kwiinqanawa ezisuka eLong Beach, eCalifornia ziya kuqhubeka nokwamkelwa kubantwana abangaphantsi kweminyaka eli-12 kwaye njengoko kufunwa ngumthetho wase-US (kwindawo yezizathu zonyango kunye neenkolelo zonqulo).
KwiCarnival Miracle® esuka eSeattle; ICarnival Pride® ngo-Okthobha 31, 2021 ukusuka eBaltimore; ICarnival Glory® ngoNovemba 28, 2021 evela eNew Orleans; kunye neCarnival Miracle® kaNovemba 28, 2021 esuka eLong Beach, ukukhululwa kwezitofu kuya kwamkelwa kuphela njengoko kufunwa ngumthetho.
Ukuxolelwa kwabantwana kunye nabantu abadala akuqinisekiswanga kwaye kulawulwa amandla ngokusekwe kwinani lilonke leendwendwe ezigonyelweyo ekulindeleke ukuba zibekho. Iindwendwe ezingagonywanga ezinikwe uxolelo kufuneka zihambelane neemfuno ezithile kunye neenkqubo, ezibandakanya:
Ukwenza uvavanyo olubi lwe-PCR COVID-19 kuvavanyo, kuthathwe phakathi kweeyure ezingama-72 ukuya kwezingama-24 ngaphambi komhla wokuhamba ngenqanawa (umzekelo, ukuba ukuhamba ngolwandle kungoMgqibelo, uvavanyo lunokuthathwa nangaliphi na ixesha ukusuka ngoLwesithathu ukuya ngoLwesihlanu, kodwa hayi ngomhla kusasa ekuseni). Iindwendwe ezingagonywanga kufuneka zithathe olunye uvavanyo lwe-antigen ekuqaleni, kwaye ziphinde zivavanywe ngaphakathi kweeyure ezingama-24 zokuhamba kuzo zonke iinqanawa ezinde kuneentsuku ezi-4. Kuza kuvavanywa i-US $ 150 ngomrhumo womntu ngamnye kwi-Akhawunti ye-Sail kunye ne-Sign account ukuhlawula iindleko zovavanyo, zokunika ingxelo kunye nokuhlolwa kwezempilo nokhuseleko. Abantwana abangaphantsi kweminyaka emibini bakhululwe kwiimfuno zovavanyo.
Isidingo seInshurensi yokuHamba- Iinqanawa zaseFlorida naseTexas
Iindwendwe ezingagcinwanga ezihamba ngenqanawa esuka eFlorida okanye eTexas kufuneka zibonise ubungqina bokhuseleko lweinshurensi yokuhamba ngexesha lokungena. (Jonga icandelo elingezantsi ngolwazi olupheleleyo malunga neemfuno zeinshurensi yokuhamba.)
Inqaku likaGqirha-eFlorida, eTexas, eLouisana naseMaryland
Ukuba ufumene uxolelo lokugonywa ngenxa yezizathu zonyango, ileta evela kumboneleli wezonyango echaza ukuba undwendwe alunakugonywa ngezizathu zonyango kufuneka ingeniswe xa kungenwa.
Ukutyelela Unxweme kunye nohambo
Iindwendwe ezingagonywanga azinakho ukuya elunxwemeni kumazibuko omnxeba ngokwawo. Iindwendwe zinokungena kumazibuko omnxeba ukuba zibhukishelwe kutyelelo lwebhola elixhaswe yiCarnival.
Ukhenketho lwebhabhalaza oluvunyiweyo lweCarnival luhambo olusebenza kwindawo elawulwayo. Iindwendwe ziya kukhutshwa kwinqanawa ziye kuhambo lwazo kwaye zibuyele emkhombeni kwangoko xa zibuya kuhambo lwaselunxwemeni. Akukho ndawo zokuma zingacwangciswanga zivunyelwe (okt, iivenkile zezipho, imivalo, iivenkile zokutyela, njl.
Kwimeko apho ukhetha ukungaluthengi uhambo lweebhabhu, iiholide zeblue zithengisiwe, okanye zirhoxisiwe ngenxa yemozulu, iindwendwe ezingagonywanga kuya kufuneka zihlale ebhodini.
Iindwendwe ezithatha inxaxheba kutyelelo lweqamza, nokuba ithini na indawo yokugonya, kufuneka ilandele zonke iinkqubo zokhenketho kunye nolwalathiso lwasekhaya ngokubhekisele kuvavanyo / ukuvavanywa, ukunxitywa kwesigqubuthelo sobuso, ukuhamba emzimbeni, njl. ndwendwela. Umzekelo, ngokusekwe kwisivumelwano sethu neSan Juan, iindwendwe ezingagonywanga ziya kufuneka zihlale ebhodini ngexesha lotyelelo lwethu apho.
Iindwendwe ezingahambelaniyo nemo engqongileyo elawulwayo yohambo lweqamza ziya kususwa kukhenketho.
Ukuba uhambo lwakho lokundwendwela kwinqanawa labucala, njengeHalf Moon Cay kunye nePrincess Cays, iindwendwe ezingagonywanga zinokuya elunxwemeni zodwa okanye zithenge naluphi na ukhenketho lwethu.
Nceda ubhekiselele yethu Buyela kwi-FAQ yeeNkonzo Uluhlu olupheleleyo lweenkqubo zethu kunye neemfuno, eziqhubeka nokuvela kwaye zingatshintsha ngaphandle kwesaziso sangaphambili.
Isicelo sokuxolelwa kulawulwa ngumthamo kufuneka singeniswe ngaphakathi kweeyure ezingama-48 zokwenza ubhukisho olutsha. Izicelo ziya kuqwalaselwa emva kokuba ukubhukisha kuhlawulwe ngokupheleleyo, ngolungelelwano lomhla wokuhamba ngenqanawa, kwaye nje ukuba sigqibe isibalo seendwendwe esigonyiweyo.
Ukuba ulundwendwe olungagcinwanga, ukubhukisha kwakho akuqwalaselwa njengokuqinisekiswa ngaphandle kokuba ufumana uxolelo oluvunyiweyo, oluya kukhutshwa kwiintsuku ezili-14 zokuhamba ngomkhumbi. Naziphi iindwendwe ezingagcinwanga ezingavunyelwanga ukuba zikhululwe ziyakucelwa ukuba ziphonononge kwaye zivume kuzo zonke izithintelo kunye neenkqubo ezibhalwe apha ngasentla ngaphambi kokukhwela enqanaweni.
Ukuba asikwazi ukuvuma isicelo, iindwendwe ziya kuba nokukhetha ukurhoxisa iindwendwe ezingafakwanga sisithuso, ukuya kumhla wokuhamba ngenqanawa okanye ukurhoxisa unembuyekezo epheleleyo kuhlobo lwentlawulo. Ngelishwa, asinakho ukunceda kwinkcitho enxulumene nesicelo sokungahlawulwa, kwaye iindwendwe zithatha yonke imingcipheko enxulumene neendleko zokuhamba ezingabuyiswayo (okt, imali yomoya, ihotele).
Siyaqonda ukuba iindwendwe ezingagonywanga ziya kujongana nezithintelo zethutyana ngexesha lokuqala kwethu ukuqala, kunye neendleko ezongezelelweyo zovavanyo kunye neinshurensi kwaye sinethemba lokuba ezi protocols ziya kuqhubeka ziguquka ngokuhamba kwexesha.
Zonke iindwendwe ezihamba ngenqanawe ebuyela umva, ngaphandle kokuthintela imeko yazo, ziya kudinga ukuvavanywa phakathi kohambo.
ISIQINISEKISO SEENDLEKO ZOKUQINISEKISA UKUHAMBA KWEENDLU EZINGAXHASIYO
Iindwendwe ezingagcinwanga ezihamba ngenqanawa esuka eFlorida okanye eTexas kufuneka zibonise ubungqina bokhuseleko lweinshurensi yokuhamba ngexesha lokungena. Le mfuno ngoku isuswa kubantwana abangaphantsi kwe-12 abangafanelekanga kwisitofu sokugonya. Nangona kunjalo, abazali bayacetyiswa ukuba ukuthenga i-inshurensi yokuhamba yabantwana babo kucetyiswa ngamandla.
Iimfuneko zomgaqo-nkqubo: ubuncinci be-US $ 10,000, umntu ngamnye, kwinkcitho yeendleko zonyango kunye ne-US $ 30,000 yokukhutshwa kwimeko yonyango engxamisekileyo kwaye ngaphandle kwe-COVID-19.
Umgaqo-nkqubo we-inshurensi kufuneka unike igama undwendwe olungagqitywanga njengomphathi womgaqo-nkqubo okanye umxhamli kwaye unokuthengwa kwinkampani yeinshurensi yokuhamba xa ukhetha undwendwe okanye ngoKhuseleko lweCarnival Vacation, olubandakanya ukhuseleko olufunekayo.
Ukukhuselwa kweCarnival Vacation kuyafumaneka ukuthengwa de kube ziintsuku ezili-14 ngaphambi kokuhamba ngomkhumbi kwiindwendwe ezihlala eMelika (ngaphandle kweNew York nePuerto Rico), Canada (ngaphandle kweQuebec), i-US Virgin Islands (iSt. Thomas, iSt. John neSt. Croix) kunye neAmerican Samoa. (Qaphela: ukubhukisha kwakho kufuneka kuhlawulwe ngemali yase-US.) Ukuba unqwenela ukuthenga uKhuseleko lweeholide zomkhosi, nceda utsalele umnxeba ku-1-800-CARNIVAL, isiCwangciso seKhefu lakho, okanye umcebisi ngezohambo.
Iindwendwe ezingagcinwanga ngaphandle kobungqina obufunekayo bomshuwalense aziyi kuvunyelwa ukuba zihambe ngenqanawa kwaye akukho mbuyekezo iya kubonelelwa.
* Ngokusekwe kwiimfuno zeendawo ezithile. Amanye amazibuko esiya kuwo ngenqanawa aqhutywa ngamalungu amanyeneyo eCarnival phantsi kwemvume zikarhulumente okanye iilayisensi.
IZIPHUMO ZEMPILO EZIPHAKAMILEYO
Zonke iindwendwe ziya kucelwa ukuba zizalise iphepha-mibuzo lezempilo kwi-intanethi kwiiyure ezingama-72 ngaphambi kokuhamba ngenqanawa kunye nokuphuculwa kokuvavanywa kwezempilo kwangaphambili, okubandakanya ukuqinisekiswa kweempendulo zabo zokuvavanywa kwempilo, ukuqinisekiswa kwamaxwebhu abo okugonya kunye nalo naluphi na uvavanyo lwe-COVID-19 olufunekayo.
Siza kubhekisa kuye nabani na oneempawu kunye neempawu ze-COVID-19, okanye abo bachongwe besemngciphekweni, kukongezwa uvavanyo lwezonyango ngaphambi kokuba babavumele bakhwele. Iindwendwe ziya kubonwa ngabasebenzi bethu bezonyango kwaye iibhodi ziya kuvunywa ngokokubona kwazo. Ukuvavanywa kwesekondari (kunye nokuhlolwa kwezempilo kulo lonke uhambo lokuhamba ngenqanawa) kuya kwenziwa xa kufanelekile.
Naliphi na undwendwe oluvavanya ukuba ulungile xa uqala, kunye nabalingane babo ohamba nabo kwi-stateroom efanayo, kunye nabanye abafowunelwa kufutshane, abayi kuba nakho ukuhamba ngenqanawa kwaye baya kunikwa ikhredithi yokuhamba ngolwandle kwixa elizayo. (Umfowunelwa osondeleyo kuye nawuphi na umntu obephakathi kweenyawo ezi-6 zomntu osulelekileyo / onempawu ezibonisa ukwanda kwemizuzu eli-15 okanye nangaphezulu kwisithuba seeyure ezingama-24 kwisithuba seentsuku ezili-14 ngaphambi kokuhamba ngomkhumbi.)
Umgaqo-nkqubo weCarnival Cruise Line kukuba wonke umntu kufuneka agonywe, linani elincinci kakhulu ngaphandle kwabantwana abangaphantsi kwe-12 kunye nabo bangakwaziyo ukugonywa. Le ndlela igqitha kwiimfuno zokuhamba ngenqanawa phantsi kwesikhokelo seCDC, kwaye iyahlangabezana neemfuno ezibekwe yindawo esihamba kuyo ngolwandle.
Ukongeza kuhambo lokuhamba ngenqanawa olugonyelweyo, siphumeze iseti ebanzi yemigaqo-nkqubo njengenxalenye yokuqalisa kwethu ngokutsha, sinomdla kakhulu kwezempilo nakukhuseleko lweendwendwe zethu, abasebenzi kunye neendawo esihlala kuzo esisebenza njengeyona nto iphambili kuthi. Ngenxa yamatyala okuphumelela kwe-COVID-19 eyenzeka kwilizwe liphela phakathi kwabo bagonyiweyo, iimfuno zethu zovavanyo lwangaphambi kokuhamba ngenqanawa zandisiwe ukubandakanya ZONKE iindwendwe. Siphinde sazandisa iimfuno zethu zemaski ezifuna iindwendwe zinxibe iimaski ngaphakathi ngaphakathi kwiindawo ezivaliweyo nakwiindawo apho abantu badibana khona.
Ngaphandle kwezi protocols ezikhoyo, kunokubakho iimeko ezintle ze-COVID-19 ebhodini ngexesha lokuhamba ngenqanawa. Iinqanawa zethu zinamaziko onyango anakho ukuxilonga kunye nokuvavanya kwaye axhotyiselwe ukulandelwa komnxeba. Iqela lethu ligonywe ngokupheleleyo kwaye linxiba iimaski ngaphakathi ngalo lonke ixesha. Ngenxa yeenkqubo zethu, iimeko ezintle ziphantsi kakhulu kunoko uluntu lujamelene nonxweme. Nangona kunjalo, ngenxa yokwahluka kwe-Delta kubangela ukonyuka kwamatyala phakathi kwabantu abagonyiweyo, kubalulekile ukuba uyazi olu lwazi lulandelayo:
Kwimeko apho iindwendwe zinxibelelana ngokusondeleyo okanye zivelisiwe kulo naliphi na undwendwe okanye ilungu leqela elisebenza kuvavanyo oluchanekileyo lwe-COVID-19, okanye babonise naziphi na iimpawu zesifo esifana ne-COVID ngexesha lokuhamba ngenqanawa, bona kunye nabafowunelwa abasondeleyo kuya kufuneka bongeze ukuvavanywa kwaye kunokucelwa ukuba babeke bodwa kwi-stateroom yabo de kube liqela lethu lezonyango ligqibe ekubeni kukhuselekile ukuba baphinde baqhubeke nemisebenzi yabo yokuhamba ngenqanawa.
Ukuba iindwendwe zihambe ngenqwelomoya ukujoyina uhambo lwazo kunye novavanyo oluqinisekileyo ekuqaleni kwazo kwaye azinakho ukuhamba ngesikhephe- okanye kuvavanyo oluqinisekileyo ngexesha lokuhamba ngenqanawa - zona kunye nabafowunelwa abasondeleyo banokucelwa ukuba bababeke bodwa ngaphambi kokuba bagoduke.
Iindwendwe ezibekelwe bucala ebhodini ziya kufumana ikhredithi yokuhamba ngenqanawa yexesha elizayo elilingana nenani leentsuku zokuvalelwa wedwa.
Kwiindwendwe ekufuneka zizinze endaweni yazo, iCarnival iya kunceda ukwenza amalungiselelo okuvalelwa bodwa; nangona kunjalo, zonke iindleko ezinxulumene noko ziya kuba luxanduva lweendwendwe.
IIMASKI NOKUHANYA UMGANGATHO WOMZIMBA
Sikhuthaza ngamandla zonke iindwendwe ukuba zinxibe iimaski zobuso xa zingaphakathi, ngakumbi iindwendwe ezingagonywanga, kubandakanya nabantwana abangaphantsi kweminyaka eli-12 ekufuneka benxibe iimaski kwiindawo zikawonke-wonke, ngaphandle kwaxa besitya okanye besela. Zonke iindwendwe ezineminyaka emi-2 nangaphezulu kuya kufuneka zinxibe iimaski zobuso kwizinyusi nakwiindawo zokuzonwabisa ezikhethiweyo zangaphakathi, zonke iivenkile zentengiso, kunye nekhasino, ngaphandle kwaxa usitya okanye usela. Iindwendwe ziya kucelwa ukuba zinxibe iimaski zobuso ngaphambi kokuba zihlale kumagumbi ethu okutyela aphambili nakwindawo yeLido Buffet kwaye ngamanye amaxesha kwezinye iindawo ezichongiweyo apho inani elikhulu leendwendwe linokuhlangana (kuya kuthunyelwa imiqondiso). Ukongeza, iimaski ziyafuneka kwiindawo ezivalelekileyo zenqanawa ezinje nge-spa, i-salon, nakuwo nawuphi na umsebenzi wasendlwini kunye nabantwana abangaphantsi kweminyaka eyi-12 (okt, i-Build-A-Bear®, iHarbari yoSapho kunye ne-Sky Zone®).
Zonke iindwendwe kufuneka zinxibe iimaski ngalo lonke ixesha lokuqalisa kunye nenkqubo yokuphelisa (kwizibuko lasekhaya kunye namazibuko okufowuna, kubandakanya inkqubo yokukhwela kwangaphambi kokukhutshwa), ngalo naliphi na uhambo lwaselunxwemeni olwamkelweyo kunye nangezinye izithuthi zothutho, kubandakanya amanzi ahambayo. Ukongeza, xa usiya elunxwemeni, iindwendwe kufuneka zikulungele ukulandela lonke ukhokelo lwasekhaya ngokubhekisele kwimaski kunye nokuhamba emzimbeni. Ubume bezikhokelo zasekhaya ziya kwabelwana ngazo neendwendwe ngaphambi kokuhla kwindawo ekuyiwa kuyo.
QAPHELA: Amagosa ezempilo eAlaska abeka iliso kwimeko elunxwemeni acebise ngamandla ukuba zonke iindwendwe, kubandakanya nabo bagonywe ngokupheleleyo, banxibe imaski yobuso ngalo lonke ixesha xa bengaphakathi nangaphandle nangaphandle kokungagcinwa komzimba. Imigaqo yase-US ifuna ukuba bonke abantu banxibe imaski yobuso kwizithuthi zikawonke-wonke kubandakanya iibhasi, oololiwe, iveni, izikhululo zeenqwelo moya, iinqwelomoya kunye nephenyane lasemini.
Iindwendwe ezigonyelweyo azinyanzelekanga ukuba zigcine umgama ophathekayo enqanaweni.
Kuyacetyiswa ukuba iindwendwe ezingagcinwanga zigcine ukuhamba ngokomzimba ngolu hlobo lulandelayo:
Ngaphakathi-Hlala ubuncinci iinyawo ezi-6 kwabanye hayi kwiqela lakho lokuhamba ngenqanawa. Kananjalo, siyakukhuthaza ukuba uthathe izinyuko xa kunokwenzeka, ukuba uyakwazi ukwenza njalo.
Ngaphandle - Hlala ubuncinci iinyawo ezintathu ukusuka kwabanye xa unganxibanga maski kwaye ingekho kwiqela lakho lomlingane.
IINKQUBO ZOLUTSHA NE-SKY ZONE®
ICamp Ocean ™: Iinkqubo zabantwana ezijongiweyo zabantwana abangaphantsi kweminyaka eli-12 eCamp Ocean azizukubonelelwa ngeli xesha.
Isangqa “C” ® & CLUB O2®: Ulutsha olungagonywanga nolutsha alunakuvunyelwa ukuba luthathe inxaxheba kwiinkqubo zoLutsha ezibekwe esweni “C” nakwi-CLUB O2, okanye ukufikelela kwi-Sky Zone® xa uhamba ngenqanawa kwiCarnival Panorama®.
ICASINO-EHLAZIYIWEYO SEPTEMBA 8, 2021
Ukukhuthaza ukhuseleko, ukuqaqamba ngokwasemzimbeni kunye nempilo yoluntu, sihlaziye iinkqubo zethu zekhasino ebhodini, ngoMgqibelo wokuqala, nge-11 kaSeptemba.
IiCasino zezabadlali abakhutheleyo kunye namaqabane abo kuphela; akukho ndibano kwiindawo zokungcakaza ngenye indlela.
Izihlalo kwiitafile zokudlala kunye neendawo zokubeka zigcinelwe abadlali kuphela.
Akukho kutshaya ekhasino ngaphandle kokuba uhleli kwaye udlala.
Ukutshaya akuyi kuvunyelwa ekhasino xa kuvaliwe.
Iindwendwe ziya kulindeleka ukuba zinxibe i-facemask ngaphandle kokuba ziyatshaya okanye zisela iziselo zazo.
Ibha yekhasino ivaliwe; iziselo ziya kusiwa kubadlali bekhasino ngabasebenzi bebhari yethu.
Siyayibulela inkxaso yeendwendwe zethu kwezi protocols zimiliselwe ngomdla womntu wonke engqondweni.
AMAXESHA OKHUSELEKILEYO OKUPHAMBILI
Iindwendwe ezigonyelweyo zinokuthatha inxaxheba kukhenketho lweCarnival kunye nokubona indawo okuzimeleyo. Iindwendwe ezingagonywanga azinakho ukuya elunxwemeni kumazibuko omnxeba ngokwawo. Iindwendwe zinokungena kumazibuko omnxeba ukuba zibhukishelwe kutyelelo lwebhola elixhaswe yiCarnival. Nangona kunjalo, ukuba uhambo lwabo lokundwendwela kwizibuko labucala, njengeHalf Moon Cay kunye nePrincess Cays, iindwendwe ezingagonywanga zinokuya elunxwemeni zodwa okanye zithenge naluphi na ukhenketho lwethu.
Kuya kuba yimfuneko ukulandela iinkqubo zempilo kuyo yonke izibuko esilityelelayo, eliphantsi kolawulo lwabasemagunyeni kwaye elinokuthi litshintshe ngaphandle kwesaziso kwangaphambili. Iindwendwe kufuneka zize zilungele ukulandela isikhokelo sendawo esimalunga nokunxiba imaski, ukuhamba kude emzimbeni, ukuvavanya / ukuvavanywa kwezempilo, njl.
QAPHELA: Indawo esiya kuyo iyaqhubeka ukuvela kwaye isekwe kwisivumelwano sethu sezibuko neSan Juan, iindwendwe ezingafakwanga sisitofu kuya kufuneka zihlale ebhodini ngalo mnxeba.
UBUME BEMPILO EBASEMPILWENI
Nceda usincede sigcine indawo esempilweni ebhodini ngokusebenzisa iisinki zokuhlamba izandla kunye nezixhobo zokuhambisa izixhobo kwindawo zokungena kwindawo nakwiindawo ezihamba abantu abaninzi kuyo yonke inqanawa. Siza kufuna iindwendwe ukuba zilandele isikhokelo malunga neendlela zokuhlala usempilweni ebhodini naxa ufika elunxwemeni, ngenkqubo yemihla ngemihla, iinkqubo zokuzonwabisa, izibhengezo, uncwadi lwe-stateroom, kunye neCarnival HUB App.
Ngenxa yeenkqubo ezintsha zokuqalisa, zonke iindwendwe ziya kudinga ukugcwalisa ukungena kwi-Intanethi kwaye ukhethe uKhetho lokuFika. Ukungena kwi-Intanethi kuyafumaneka kwi-Suite, kwiPlatinam nakwiindwendwe zeDayimani kwiintsuku ezili-16 ngaphambi kokuhamba ngomkhumbi; Ukufikelela ngokubanzi kuqala kwiintsuku ezili-14 ngaphambi kokuhamba ngenqanawa. Kubalulekile ukuba iindwendwe zifike kwangethuba kuba ukufika kwangoko akunakulungiswa kwaye ziya kucelwa ukuba zibuye ngexesha abalinikiweyo. Ngentsebenziswano yomntu wonke, sinokusebenzisana ukuze siqinisekise ukuhamba ngexesha kunye nokuqala kweholide yakho!
IZICWANGCISO ZENKQUBO YOKUSEBENZISA EZI ZILANDO ZILANDELAYO NGODISEMBA 31, 2021 PHANTSI KWEMIGANGATHO YENKCUBEKO EFANELEKILEYO:
ICarnival Vista® esuka eGalveston
ICarnival Horizon® esuka eMiami
ICarnival Breeze® esuka eGalveston
ICarnival Miracle® esuka eSeattle
IMardi Gras ™ esuka ePort Canaveral
ICarnival Magic® esuka ePort Canaveral
Carnival Sunrise® eMiami
Carnival Panorama® ukusuka eLong Beach
ICarnival Pride® evela eBaltimore; Ukuhamba ngolwandle ukuqala ngoSeptemba 12, 2021
ICarnival Dream® yaseGalveston; Ukuhamba ngomkhumbi ukuqala ngoSeptemba 19, 2021
ICarnival Glory® evela eNew Orleans; Ukuhamba ngomkhumbi ukuqala ngoSeptemba 19, 2021
Carnival Miracle® ukusuka eLwandle oluLwandle; Ukuhamba ngomkhumbi ukuqala ngoSeptemba 27, 2021
ICarnival Freedom® esuka eMiami; Ukuhamba ngomkhumbi ukuqala ngo-Okthobha 9, 2021
ICarnival Elation® esuka ePort Canaveral; Ukuhamba ngomkhumbi ukuqala ngo-Okthobha 11, 2021
ICarnival Valor® evela eNew Orleans; Ukuhamba ngolwandle ukuqala ngoNovemba 1, 2021
ICarnival Legend® yaseBaltimore; Ukuhamba ngolwandle ukuqala ngo-Novemba 14, 2021
ICarnival Pride® esuka eTampa; Ukuhamba ngolwandle ukuqala ngo-Novemba 14, 2021
ICarnival Conquest® esuka eMiami; Ukuhamba ngomkhumbi ukuqala ngoDisemba 13, 2021
I-Carnival Radiance® esuka eLong Beach; Ukuhamba ngomkhumbi ukuqala ngoDisemba 13, 2021